Mormii Asmaraatti kaleessaa taasifame hordofe dargaggoonni hidhamaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Bakki guyyaa kaleessaa mormiin itti taasifamee fi Kaaba Asmaraa argamtu, Ahiriyaatti, loltootaan eegumsi olaanaa taasifamaa akka jiruufi namni sodaate manaa akka hin baanne ibsame.
Namoota hiriira bahan dhukaasaan adda akka bittina'aan erga taasifame booda dargaggoonni tokko tokko ''gaaffiif barbaadamtu'' jedhamani hidhamaniiru jechuun maddeen BBC'tti himan.
Guyyaa kaleessaa waaree booda mormii ka'een sagaleen dhukaasaa dhagahamuufi Imbaasiin Ameerikaa magaalicha keessatti argamuus bakkeewwan adda addaatti mormiin akka turee fi lammiileen Ameerikaa akka of-eggatan ibsa baase ture.
Osoo baay'ee hin turiin immoo sababa mormii fi hiriirri taasifamuu isaa viidiyoon gabaabaa ibsa pirezidantii mana barumsaa Aldiyaa'i al-Islaam Ustaaz Hajii Muusaa Mohaammad Nuur miidiyaalee hawaasaa irratti gadhifameera.
Viidiyoo miidiyaale hawaasaa irratti gadhiifameen sagaaleen dhukaasaa fi namoonni lubbuu ofi baraaruuf osoo fiigan mul'ata.
Haa ta'u malee, miidhaan gahuu isaa wanti beekame hin jiru. Dubbii himaan mootummaa Ertiraa tiwitarii isaanii irratti rakkoo tokko malee jarri morman akka gargar faca'aan barreessaniiru.
BBC'n odeeffannoo dabalataa argachuuf ministira kominikeeshinii biyyattii argachuufis ta'e Imbaasii Ertiraa Keeniyaa argamu gaafachuuf yaaluus hin mikoofne.
Gama kaaniin, Imbaasii Xaaliyaanii Asmaraa argamutti hojjeta kan ta'e Diyagoo Solinaas, mormii fi waldhabdeen guyyaa kaleessa waaree booda uumamuu isaa ibsuun ergasi yeroosuma nagana bu'eera jedhaniiru.
Maddeen keenya Asmaraa jiran garuu kutaa magaalatti Ahiriyaa jedhamu loltootaan eegamaa jiraachuufi namoonni hidhamuu isaanii kan ibsan.
Maaltu waldhabdee kana kaaase?
Manni barumsaa Aldiyaa'i al-Islaam harka mootummaa jala akka seenuuf barana baatii Fulbaanaa keessa xalayaan mana barumsichatti ergamee ture.
Koreen maatii mana barumsichaa garuu qarshii ummataan waan ijaarameef ummata malee mootummaan dhaaluu hin danda'u jechuun mormuun mariin irratti taasifamu isaa himama.
Viidiyoon torban lama dura yeroo maatii fi barattoonni mari'atan akka agarsiisutti Hajii Muusaa Muhaammad ''yaada keessan hin fudhu, fudhatam hin qabu'' jechuun murtee mootummaa mormani ture.
Dabalataanis, manni barumsaa kuni naamusa barnoota Islaamaa jalatti buluu akka qabduus himani turan.
''Barattoonni uffata fuula isaanii dhoksu uffatani dhufan ijoollee keenya. Kan isaan xuqu hin jiru. Waan dhufu ni falmanna. Namni amantii fi naamusa kan hin eegnee fi hin duune hin jiru,'' jechuun dubbatan.
Dubbii isaanii hordofe hirmaattonni ammas ammas harka rukutaafi turan. Jaarsa umurii 93 kan ta'an Hajii Muusaan barattoonni 2,800 fi maatiin barattootaa 5,600 akka jiran eeruun mootummaan ummata hammana gaddisiisuu akka hin qabne dubbataniiru.
Dabalataanis, ''manni barumsaa kuni qarshi ummataan waan hojjetameef karaa amantiin keenya nu eeyyamuun seera Shaariyaa jalatti buluu qabna,'' jechuun hirmaattotaaf himaniiru.
Kana hordofeeti egaa jaarsi kun mana hidhaa kan seenan.
Maddeen magaalaa Asmaraa irraa BBC'tti akka dubbatanitti ka'umsi mormi kaleessaas jaarsi ummata biratti kabajaman hidhamuu isaaniifi malli barnootaa mana barumsichaa akka jijjiiramu ta'uu isaati jedhaniiru
Barattoonni Daayaa'i dhibba ta'an hiriira nagaa kan bahan yoo ta'u, ''abbaa keenya nu hiikaa, mana barumsaa keenya nu deebisaa'' jechuun dhaadannoo dhageessisaa daandii Haarinnat jedhamurratti kan qajeelan.
Namoonni hiriira bahanitti dhukaasni qilleensatti dhukaafames jeequmsa uumeera.
Ertiraa magaalaa Asmaraatti mormiin taasifamuus mootummaan waan guddaa miti jedheera
Dhuguma mormiin taasifamu ministirri odeeffannoo biyyattii mirkaneessanis waan oduu guddaa ta'u miti jedhaniiru.